We She Me: ရပါတယ်
အိမ်ရှင် - ထမင်းထပ်ထည့်ပါဦး။
ဧည့်သည် - ရပါတယ်။
အိမ်ရှင် - ကော်ဖီ သောက်ဦးမလား။
ဧည့်သည် - ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
သင်သာ အိမ်ရှင်ဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ထမင်းထပ်ထည့် ပေးမှာလား။ သင်က ဧည့်သည်ဆိုရင်ရော ဘာဆိုလိုချင်တာလဲ။ ထပ်စားမှာလား။ တော်ပြီလား။ “ရပါတယ်” ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ပေးလည်း ရပါတယ် ယူမယ်။ မပေးလည်း ရပါတယ် ဒီအတိုင်းပဲ ရှိပါစေ ဆိုတာများလား။ တကယ်လည်း အဲဒီ အဓိပ္ပါယ် ပါပဲလေ။
“ရပါတယ်” ပြောတာ ကျွန်တော့်မှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အကျင့်ပါ။ သူများက တစ်ခုခု မေးလိုက်ရင် ဘာမှန်းမသိ “ရပါတယ်” ပြန်ဖြေပြီ။ တစ်ဖက်လူခမျာ ကိုယ်ဘာလိုချင်မှန်းမသိ ဖြစ်ရတယ်။ သူက ကိုယ့်ကို အရမ်း ပေးချင်၊ ကျွေးချင်နေရင်တော့လည်း အတင်း ပေးလိုက် ကျွေးလိုက်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ခမျာမယ် လက်တွန့်နေရော။
ဒီအကျင့် ပျောက်သွားတာ နိုင်ငံခြား သွားပြီးမှပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ မဆိုထားနဲ့ နေတာကြာတဲ့ မြန်မာတွေပါ စိတ်ဓါတ်တွေ အထိုက်အလျောက် ပြောင်းလာ ပြင်လာကြတော့ သူတို့နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ အခါ မြန်မာပြည်က လူတွေကို ဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံလို မရတော့ပါဘူး။ သူတို့ ပြောတာကို နားလည်အောင် လုပ်ရတယ်။ နားမလည်ဘဲနဲ့ နားလည်ချင်ယောင် ဆောင်လို့ မရဘူး။ သူတို့ကိုလည်း တိကျတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြန်ပေးရတယ်။ ဥပမာ “မနက်ဖြန် တွေ့မယ်” နဲ့လည်း မရဘူး။ “မနက်ဖြန် မနက် တွေ့မယ်” နဲ့လည်း မရ။ “မနက်ဖြန် မနက် ၁၀ နာရီတွေ့မယ်” နဲ့လည်း မလုံလောက်သေးဘူး။ “မနက်ဖြန် မနက် ၁၀ နာရီတွေ့မယ်။ အကြောင်းထူးရင် ဖုန်းကြိုဆက်လိုက်မယ်” အဲဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
“ရပါတယ်” လို့ ပြန်ဖြေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော့ အားနာတာပါ။ အားနာတာနဲ့ အဖြေ အတိအကျ မပေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားတာ။ အားနာတာမှ နှစ်မျိုး အားနာတာပါ။ “ယူမယ်” လို့ ဖြေလိုက်ရင်လည်း သူ့ဆီက ထပ်တောင်းရမှာ အားနာ။ “မယူဘူး” ဖြေလိုက်ရင်လည်း သူပေးတာ မကောင်းလို့ ထင်မှာ သူ့စေတနာကို စော်ကားသလို ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်သေးတယ်။ နောက်တစ်ကြောင်းက ရှက်တတ်တာပါ။ မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင်၊ ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်း ကြိုက်လို့ထင် ဖြစ်မှာကလည်း စိုးသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မဝေခွဲတတ်တာပါ။ Yes လား No လား မကွဲပြားတဲ့ အပြင် Perhaps/May be လောက်တောင် အဓိပ္ပါယ် မဆောင်တဲ့ “ရပါတယ်” ကို အလွယ် ပြောမိနေတယ်။
ကျွန်တော် - မယူတော့ပါဘူး။ စားကောင်းကောင်းနဲ့ နှစ်ပွဲတောင် စားလိုက်လို့ ဗိုက်အရမ်း တင်းသွားပြီ။
ကျွန်တော် - ဟုတ်ကဲ့ သောက်မယ်။ သကြား မထည့်ပါနဲ့။
အဲဒီလို ငြင်းတဲ့ အခါမှာလည်း အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ သူပေးတာ မကောင်းလို့ မဟုတ် မိမိမှာ လုံလောက်သွားပြီး ဆိုပြီး ငြင်းတတ်လာတယ်။ ယူမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လိုချင်တာ ဘယ်လိုပုံစံဆိုတာ ပြောဖို့ ၀န်မလေးတော့ဘူး။ ဒါမှလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိမည်။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ဟာ ပေးမည့်သူအတွက် ၀န်မလေးဘူးဆို ထုတ်ဖော် ပြောလိုက်မှ သူ့စေတနာလည်း ပိုပြီး ပီပြင်သွားမည်။ ကိုယ်လည်း လိုချင်တာ ကွက်တိရသွားမည်။ ဒီလို ပြောလိုက်လို့လည်း ပေးမည့်သူက စေတနာ ကွက်သွားမှာ မဟုတ်။ “ကော်ဖီ သောက်မလား” မေးတာကို “ကျွန်တော်က ကော်ဖီဆို Arabian Coffee မှာ သောက်တတ်တာ” လို့ သွားပြောရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
ဒီလို ရေးထားပေမယ့် ကျွန်တော်က အပြောအဆို အင်မတန် ညံ့ဖျင်းပါသေးတယ်။ နောင်အားမှ “အရေးနဲ့ အပြော” ဆိုပြီး ခေါင်းထဲ စီထားတာကို ချရေးလိုက်ပါဦးမယ်။ တကယ်တော့ ဒီ Post က မြန်မာပြည်က ရွှေမျိုးတွေ အတွက် ပိုပြီး ရည်ရွယ်တာပါ။ သို့သော်လည်း စာဖတ် ပရိသတ်တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်က လူကို မျှော်ရတာ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တိုက်ရိုက် ကြည့်တဲ့သူဆို အင်မတန်ရှားပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ဂျာမနီက လိုလို အမေရိကားက လိုလို Proxy တွေ သုံးပြီး ၀င်လာမှပဲ ဟေး မြန်မာပြည်က ဖတ်သွားပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာရတယ်။
| FLAGS: Me , Others
pmmw - 4/1/08, 6:19 PM
That is right.I've faced that kind of
situation when i met one burmese guy who lives at abroad foralong time.
I said to him .Ya Par Tal. He asked me that what are you trying to say?
Andy Myint - 4/2/08, 11:17 PM
Yeah, the same happened to me, PMMW.....
ပီတိ - 4/3/08, 4:42 PM
ပြည်တွင်းမှာပို သုံးဖြစ်ပါတယ်။ မရင်းနှီးတဲ့လူတွေကို ပိုပြီး သုံးလေ့ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
အခုတော့ အသိအိမ် အလည်သွားရင် ကော်ဖီလား၊ အအေးလားမေးတာတောင် လက်ဖက်သုတ်နဲ့ ရေနွေးကြမ်း လို့ ပြန်ပြောနေပြီ….
ကျွန်တော်က ရပါတယ် မပြောတတ်ဘူး၊ မယုံရင် ကျွေးကြည့်လေ… ဟဲဟဲ
Anonymous - 4/4/08, 2:32 AM
Thanks for posting Tone's new pics. She got4teeth now :) Yeah, always hesitate to say what I want with unfamiliar friends/colleagues.Though want to change this behaviour, don't know how to make it. This is Burmese copy right behaviour.
Andy Myint - 4/5/08, 11:20 PM
ဟားဟား... ကိုပီတိကိုတော့ ယုံပါတယ်ဗျာ။ ဟုတ်တယ် မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ပိုပြောဖြစ်တယ်။
Dear Reader, thanks for visiting the blog. That's right. Some behaviours are hard to root out.
Moe Cho Thinn - 7/3/10, 2:35 AM
သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ တို့ကို သင်ပေးတယ်။ အလှူအိမ်မှာ ထမင်း ထပ်ထည့်မလား မေးလို့ ရပါတယ် လို့ ငါက ပြန်ဖြေရင် အဲဒါ ထပ်ထည့် လို့သာ သဘောပေါကပ်ေတော့ တဲ့..။ သူက ရပါတယ် ဖြေလိုက်၊ ကိုယ်က ထပ်ထည့် လိုက်နဲ့ အတော်အပေးအယူ မျှခဲ့ဖူးတယ်။ ဟားဟား
Anonymous - 7/3/10, 2:58 PM
အပေါ်က အဒေါ်ကြီးက အခုမှ ထမန့်တယ်ဆိုတော့ တစ်နှစ်လောက်ကြာ်မှ လာဖတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလားဟင်။
myo - 7/3/10, 4:03 PM
" ရွှေမျိုးတွေ " လို့ ရေးထားတာ တွေ့လို့ပါ။ အမှန်က ဆွေမျိုး ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖေဆိုလည်း "ရွှေမျိုး" လို့ပဲ ပြောတယ်။ "ဆွေမျိုး" ပါဗျာလို့ အမြဲပြောဖြစ်တယ်။ (topic နဲ့ မဆိုင်တာတော့ ဖြစ်သွားတယ်။) ဟီးဟီး :D